Ahoana no blockchain hampivelatra ny teknolojia ao 2018? - Blockchain News
Efa ho folo taona lasa izay ny olona nahita voalohany ny momba ny teknolojia blockchain. Nanomboka tamin'izay, ny solontenan'ny orinasa isan-karazany no fanaraha-maso ny fivoaran'ny teknolojia ity mba hitady pampiasana ho an'ny izany eo amin'ny saha. Ary, indrindra ireo orinasa nametraka fifanarahana Nampitambatra ho toy ny Enterprise Ethereum Alliance (EEE), R3, ary Hyperledger Project, hamorona blockchain vaovao mifototra amin'ny vahaolana. Te-hizara hevitra ny manam-pahaizana momba ny fampandrosoana ny blockchain in 2018, ary izay orinasa dia mikasa ny hampihatra ny teknolojia vaovao amin'ny hoavy tsy ho ela.
Blockchain Technology Mampivelatra
Araka ny Forbes, hoy blockchain dia hanana fiantraikany lehibe-miainga ho an'ny an-dalana hijery ny mpampiasa sy hameno ny toerana banga kandidà. In 2018, Hisy sehatra maro eny an-tsena mitovy amin'ny APPII, izay manome mpampiasa amin'ny “manan-tsaina” mombamomba ny blockchain tambajotra. Tsy vitan'ny no ahitana ny mombamomba ireo mpampiasa CVS, fa koa momba ny asa mendrika sy ny zava-bita, taratasy fanamarinana ny fifaninanana fandaharanasa fanabeazana sy fanazavana tena ilaina hafa. afa-tsy, toeram-pianarana sy ny mpampiasa dia afaka mampiasa mombamomba hanamafy izany vaovao, amin 'izany fanaovana izany azo antoka tanteraka.
Ny tatitra vao haingana avy amin'ny IDC Fahasalamana Insights - ny fikarohana sy mila hevitra mafy - dia manamarika fa ato anatin'ny taona vitsy ny teknolojia blockchain no ampiasaina amin'ny sehatra maro ny fitsaboana. Ny fandalinana “World vinavina ny fitsaboana orinasa 2018” dia maminavina fa amin'ny taona manaraka 20% ny fikambanana dia ho fampandrosoana mavitrika blockchain tetikasa. By 2020 blockchain dia ampiasaina amin'ny fitantanana miasa, ary koa noho ny fihazonana angona ny marary. Ny orinasa Skycell ohatra dia mazava tsara ny fomba sy IoT blockchain hanatitra mahomby famatsiana ny fanafody orinasa, izay ahitana vola, billing, ary ny fiantohana.
Mandritra izany fotoana izany mpandray anjara tamin'ny tetikasa Blockchain Research Institute, izay ahitana IBM, Pepsi Co., ary FedEx, blockchain manantena fa ampiharina ao amin'ny orinasa mpamokatra entana, sy ny orinasa famokarana, dia tsy ho fitaovana lehibe fotsiny, fa kosa ny hanana taranaka faharoa ny niomerika revolisiona, ny voalohany ho ny famoronana ny Internet. Toy izany ireo orinasa toy ny Foxconn dia hampiasa ny blockchain mba hanara-maso ny varotra ao amin'ny famatsian rojo.
Blockchain talen'ny ao amin'ny LOOMIA Saoly Lederer dia mino fa amin'ny 2018 dia ho hitantsika ny fomba nanorina orinasa, izay efa nahavita hanaporofo ny tenany amin'ny tsena isan-karazany, mpanamory fiaramanidina dia hanomboka ny asa sy ny vokatra miorina amin'ny blockchain-bahoaka.
Nametraka orinasa tena fantatsika koa hoe rahoviana ny fomba andrim-panjakana izay tsy niraharaha ny aterineto ao amin'ny taona 90 no levon'ny tranonkala startups, ary tsy te-ho toy izany koa Mahagaga ny fahatongavan'ny blockchain teknolojia. Izany dia midika hoe manaiky izy ireo na fanandramana manomboka amin'ny blockchain na handeha any amin'ny lalana ireny horonantsary malaza ireny ny.
Noho ny blockchain, marani-tsaina ny fampiasana ny fifanarahana dia hiova koa. Tamin'ny fotoam-pahavaratra IT goavana IBM, American Insurance Corporation AIG, ary ny ara-bola orinasa Standard nanofa plc mpanamory vita fitiliana ny blockchain-monina “manan-tsaina” politika fiantohana iraisam-pirenena. Sambany blockchain sy marani-tsaina fifanarahana no nampiasaina ao amin'io orinasa, izay hampivelatra bebe kokoa ity tetikasa ity eo amin'ny sehatra goavana amin'ny 2018. Oliver Bussmann no antoka fa blockchain no miova tsy ny ara-bola sy ny fiantohana, fa sehatra hafa ihany koa fiantraikany indostria. Noho izany, taona manaraka ireo orinasa maro dia tsy maintsy mampifanaraka ny raharaham-barotra modely mba hihaona amin'ny fepetra takiana ao amin'ny tsena vaovao.
Ao anatin'ny tontolo izay mpanelanelana dia lasa lany andro, ireo orinasa dia tsy maintsy mianatra intsony mieritreritra ao silos ary misokatra bebe kokoa ny lasa mpiara-miasa ao amin'ny firaisan'ny tontolo iainana na eo amin'ny sehatra malalaka kokoa. Izany, mifandimby, dia midika hoe manapa-kevitra inona no karazan-draharaha modely tiany - na ny sehatra tsehatra, vokatra piesy, Ômnia-fantsona paikady, sy ny sisa.
Oliver Bussmann - ny filohan'ny tsy-ho-tombony Crypto Valley Association sy ny CIO teo aloha ao amin'ny UBS - nanamarika fa banky lehibe kokoa no ho liana amin'ny blockchain rafitra fandoavam-bola, satria naka fanahy azy ny tombony blockchain mitondra eo amin'ny tena-ny fanodinana, Mety ambany mombamomba, ambany ny vola lany sy ny mangarahara. Ny mpandraharaha ihany koa fa amin'ny 2017, ny orinasa dia nanana ny tombontsoa hiasa amin'ny karama efa bebe kokoa ny saina ho amin'ny vaovao karazan-tolotra izay manome fahafahana blockchain, indrindra raha blockchain miaraka IoT sy AI. Araka ny Bussman, fironana io dia hitohy ao 2018, araka ny tatitra vao haingana tao Forbes Milaza ihany koa. Ny mari-pamantarana sy ny maha fitongilànana ny blockchain dia tena ilaina ho an'ny fanaraha-maso tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny fitaovana amin'ny IoT. Noho izany, ny tatitra dia manamarika fa ny hery computing ampiasaina amin'ny fitrandrahana BitCoins azo ampiasaina mba hiarovana marani-tsaina trano amin'ny cyber-nandroba ny taranaka vaovao.
Ny Tale Jeneralin'ny fototry Vision, Abhishek Pitti mamaritra blockchain toetra izay hanampy amin'ny fampandrosoana ny fiarovana antontan-kevitra matanjaka. Izy dia mino fa amin'ny 2018, amin'io faritra io dia hahita ny soa lehibe indrindra avy amin'ny fiaraha-mientana ifampizarana toy izany fampandrosoana ny teknolojia toy ny Fifidianana Akama, encryption, ary blockchain:
Blockchain dia fitaovana mahery vaika izay tsara dia afaka mitondra fiovana eo amin'ny indostria maro, ary mialoha ny fivoarana ara-teknolojia sy ny fanafenana Fifidianana Akama, miaraka blockchain, dia ho Ny Fomba Ahitana ny fahombiazana eo amin'ny fiarovana ao amin'ny orinasa 2018. Ohatra, ny tahirin-kevitra Equifax Hack dia zavatra ilaina fotsiny blockchain fa nisakana azy. Raha ny teknolojia blockchain afaka milaza tena nanampy mpanjifa fahefana bebe kokoa ny rakitra manokana nanana ny orinasa, fiarovana fanao ratsy ho nandao azy mora, miaraka na tsy misy blockchain. Aiza ny fiarovana blockchain endri-javatra dia tena tonga any ny ho ao amin'ny anankiray efa voavitrana amin'ny IoT. Amin'ny tsy mitsaha-mitombo isa ny fitaovana mifandray, 2018 Mila ny fiarovana blockchain maritrano mba hiarovana IoT fampiharana sy ny mpampiasa avy amin'ny angon-drakitra banga be pitsiny. Mafy aho mino fa 2017 ihany tranofiara Fa inona no ho avy ao 2018 manerana ny tontolo iainana sy ny blockchain manontolo amin'ny sehatry.
dmitriy Zhulin, mpiara-manorina ny ins Tontolo Iainana, manantena ny mahita blockchain ho be nolaniana mahazatra ny teknolojia ao amin'ny 2018, manova iray manontolo ny orinasa maro be avy amin'ny asa ara-bola sy ny antsinjarany, ny fitaovana sy ny fanafody. Mandritra izany fotoana izany Max Kordek, mpiara-manorina ny orinasa Lisk, dia mino fa afaka manantena fivoaran-draharaha maro tao amin'ny blockchain Network fitantanana in 2018, izay ahitana marimaritra iraisana vaovao rafitra sy fitsipika nohavaozina noho ny hanapa-kevitra momba ny fanavaozana tambajotra:
Miaraka Bitcoin ny User mampandeha Soft Fork (UASF), na Lisk ny ampandraiketiny-Porofo-of-Tsatòkan'i fifanarahana rafitra, dia afaka manantena hoavy vahaolana izay hanampy manao fanapahan-kevitra lehibe momba ny tetikasa ny hoavy. Ny olana momba ny scalability dia ho lohahevitra mafana iray hafa mitohy an 2018. Current blockchain rafitra dia mbola lagging aoriana raha ampitahaina amin'ny raharaham-barotra hafainganam-pandeha natolotry ny mpifaninana nentim-paharazana toy ny VISA na Mastercard. Ny orinasa dia tokony hahita vahaolana vaovao sy manatsara fehezan-dalàna amin'ny fotoana izay fifaninanana ambaratonga ny tompon'andraikitra mety ho tratra. Izany no iray amin'ireo antony mahatonga Lisk no fampiharana sidechains. Antoka tsara tambajotra nizara asa sy ny fanatsarana ny fikarakarana haingana eo amin'ny tambajotra dia tena ilaina.
Blockchain Technology Mampivelatra 2018
Previous Post:Cryptocurrency tsena fampandrosoana in 2018
Next Post:Ny zava-nitranga manan-danja indrindra amin'ny 2017 ao amin'ny Crypto Community